Yaadannoo Waggaa 1ffaa Ajjeechaa Artistii Jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa Ilaalchisuun Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo. – Adda Bilisummaa Oromoo
Yaadannoo waggaa 1ffaa ajjeechaa Artistii jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa yommuu kabajannu, ilmaan sabaa, haqa uummata isaanii gad baasuudhaan sagalee waan ta’an qofaaf kan ajjeechaan suukanneessaa sirna Itoophiyaan ajjeefaman fi kan achi buuteen isaanii dhabame hedduu walumaan yaadachuu fi seenaa isaanii ol kaasuun barbaachisaa dha. Simbo-qabeessa, miidhagina ogumaa aartiitiin kan guutame waltajjii irratti tokkummaa uummata keenyaa, aadaa, dhibdee hawaasaa, siyaasaa fi dinagdee sirni cunqursaa uummata keenya irraan gahe walaleessee yeedaloo nama hawwatuun sagalee ta’ee roorroo uummatichaa agarsiisaa fi falmaa bilisummaaf uummata onnachiisaa kan ture Haacaaluun Hundeessaa erga ajjeefamee har’a waggaan tokko dhumateera.
Goota falmataa sabaa tahee Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa bahataa ture, kan ummatichi akka qaroo ija isaatti ilaalu kana bu’aa siyaasaa yeroof ajjeesuun ajjeechaa isaatiin
sababfatanii hoogganoota, qondaalota, miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo jumlaan ukkaamsuun hidhaatti guuruun fi garii ammo ajjeesanii dhabamsiisuun godaannisa seenaa fi guyyaa kana ittiin yaadannuu dha.
Gochaaleen akkasii farraa dimokraasii kan yaada ofii ibsachuu waan tahaniif ni balaaleeffanna. Addi Bilisummaa Oromoo gadda kana bara baraan yaadachaa warri ajjeechaa Haacaaluu kana rawwatan qormaata godhame dabalatee qaama walabaaf ifa tahee bifa uummataaf amansiisaa taheen akka murtee seeraaf dhihaatan irratti hojjatna. Artistoonii bakka gara garaatti hiraarsaan irra gahaa jiru haal duree tokko malee akkataa qabsoo keenyaan gad lakkifaaman irratti qabsaawuu ummata keenya yaadachiifna.
Qabsaawaan ni kufa; Qabsoon itti fufa! Injifannoo uummata balaaf! Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajji 28/2021